Ndị bịara na WWDC isi okwu gosipụtara ụfọdụ onyonyo na vidiyo | Esi m mac
Ndị bịara mmemme WWDC gosipụtara ụfọdụ onyonyo na vidiyo
Ọ dabara nke ọma mmepe na pụrụ iche na mgbasa ozi ndị na-ezute taa na Joselọ Mgbakọ San Jose McEnery, ha na-amalite ịkekọrịta ụfọdụ onyonyo nke ahịrị kwụ n'èzí na ebe mgbakọ ahụ n'onwe ya yana vidiyo dị ndụ. Eziokwu bụ na ọ gafere ihe karịrị awa atọ ruo mgbe isi okwu mmalite malitere na ndị mmadụ abanyelarị n'ahịrị ruo oge ụfọdụ iji banye ebe mgbakọ ahụ.
O doro anya na e nwere ọchịchọ maka isi okwu na ụfọdụ mgbasa ozi gbanwere na ebe ahụ na-ebido mgbasa ozi na na-eduzi na netwọk mmekọrịta Youtube, yabụ anyị hapụrụ ihe a niile n’azụ awụliri elu ka ị wee hụ ije tupu mbido ihe omume Apple a tụrụ anya na June.
Ndị enyi nọ n'etiti 9to5Mac hapụrụ anyị kpọmkwem na Youtube ya mere, anyị nwere ike ịhụ ọganihu nke mpụga nke ogige ahụ:
Ndị a bụ ụfọdụ onyonyo na-abịa site na mgbasa ozi - dịka Indian Express- na ndị ọzọ n'ụdị tweet sitere na ndị bịara mmemme ahụ, dị ka onye ama ama Federico Viticci:
Na-abanye # WWDC17 pic.twitter.com/lG9Y9itdRk
- Federico Viticci (@viticci) 5 June nke 2017
Ọtụtụ mgbasa ozi ebe a. (Ọtụtụ mmadụ n'ozuzu ha mana ihe dị ka ihe dị n'usoro.) pic.twitter.com/GDo9wGKpC9
- Neil Cybart (@nekwu_igwe) 5 June nke 2017
Na foto ndị a na-abịarute, ị ga-ahụ na n'oge tupu ihe omume ahụ, ebe ahụ dị jụụ, mana ọ bụrụ na anyị elee vidiyo vidiyo nke ebe ahụ ruo nwa oge, anyị ga-ahụ na kwụ n'ahịrị ahụ adịla ezigbo mkpa. Obi abụọ adịghị ya na ihe omume ahụ na-ebuli atụmanya dịka Apple maara anyị ahụ na oge a anyị nwere ike ikwu na ọbụlagodi ihe ọzọ dị ka ọ bụ isi mmalite nke afọ N'ime ya, na mgbakwunye na ngwanrọ ha ga-eweta, ha nwere ike igosi anyị ụfọdụ ngwaike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Ndị bịara mmemme WWDC gosipụtara ụfọdụ onyonyo na vidiyo
tvOS emelitere ma gosiputara ngwa Amazon
Apple ga-agbasa WWDC ma m si Mac